အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ ပြင်းအား ၆ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိ ငလျင် လှုတ်ခတ်ရာ ဆူနာမီအသေးစား ဖြစ်ပေါ် ၊ လူနေအိမ်များ ပျက်စီး - Xinhua News Agency
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ် Malang မြို့ Majang Tengah ကျေးရွာ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလက ပြင်းအား ၆ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိ မြေငလျင် လှုတ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် ပျက်စီးသွားသော လူနေအိမ်အနီးတွင် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဂျကာတာ ၊ ဇွန် ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ Maluku ပြည်နယ် Seram ကျွန်း၌ ယနေ့ ဇွန် ၁၆ ရက်တွင် ပြင်းအား ၆ ဒသမ ၁ အဆင့်ရှိ မြေငလျင် လှုတ်ခတ်ပြီး ဆူနာမီအသေးစား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ လူနေအိမ်ခြေများစွာ ပျက်စီးကာ လူပေါင်းများစွာ နေအိမ်များမှ ထွက်ပြေးရကြောင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမြင့် တစ်မီတာခန့်ရှိသော ပင်လယ်ရေလှိုင်းများသည် Maluku Tengah ခရိုင်အတွင်းရှိ ကမ်းရိုးတန်းဧရိယာသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့ရာ ဒေသခံများအကြား ထိတ်လန့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပုံကို ဆင်ဟွာသို့ ပေးပို့သည့် ဗီဒီယိုရုပ်သံဖိုင်တွင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
လူနေအိမ်ခြေများစွာသည် ပျက်စီးသွားပြီး ဒေသခံများလည်း နေအိမ်များစွန့်ခွာ၍ ဘေးကင်းလုံခြုံရာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရကြောင်း ပြည်နယ်ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ၏ အတွင်းရေးမှူး Sais Salong က ဆင်ဟွာသို့ ဖုန်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် မြေငလျင် လှုတ်ခတ်ပြီးနောက် ထိခိုက် သေဆုံးမှုသတင်းများကို ချက်ချင်း မရရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ငလျင်လှုတ်ခတ်မှု နှင့် အသေးစား ဆူနာမီ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပေါ် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်များကို ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ၏ တာဝန်ရှိသူများက စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း အေဂျင်စီအတွင်းရေးမှူးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ မြေငလျင်သည် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီ ၄၃ မိနစ် (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ၀၄၄၃)တွင် Maluku Tengah ခရိုင်၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၆၇ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုပြု၍ မြေအောက် ၁၀ ကီလိုမီတာတွင် လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ကြောင်း မိုးလေဝသ ၊ ရာသီဥတု နှင့် ဘူမိရူပဗေဒ အေဂျင်စီထံမှ သိရသည်။
လှုပ်ခတ်မှု ကြိမ်နှုန်းပြင်းအားအဆင့်( MMI III) ရှိ အင်အားပြင်းငလျင်ဒဏ်ကို Maluku Tengah ခရိုင်အတွင်းရှိ Tehoru ခရိုင်ခွဲ ၊ Masohi မြို့ ၊ Seram Bagian Timur ခရိုင် Bula ခရိုင်ခွဲ နှင့် Seram Bagian Barat ခရိုင် Kairatu ခရိုင်ခွဲတို့က သိရှိခံစားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
Maluku ပြည်နယ် မြို့တော် Ambon တွင် လှုပ်ခတ်မှု ကြိမ်နှုန်းပြင်းအားအဆင့်( MMI I) ကို သိရှိခံစားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
JAKARTA, June 16 (Xinhua) — A 6.1-magnitude earthquake triggeredasmall tsunami, damaged scores of houses and forced dozens of people to flee homes in Maluku province’s island of Seram in Indonesia Wednesday, an official said.
A video footage sent to Xinhua showed sea waters with the height of less than one meter entered coastal areas in Maluku Tengah district, triggering panic among residents.
Several houses were destroyed and residents fled homes to safer grounds, Sais Salong, secretary of the provincial disaster management agency, told Xinhua by phone.
However, there were no immediate reports of casualties after the earthquake, he said.
A risk assessment on the impacts of the small tsunami and the jolts of the quake has been undertaken by the disaster agency officials, he added.
The quake hit at 11:43 a.m. Jakarta time (0443 GMT) with the epicenter at 67 km southeast of Maluku Tengah district and the shallow at 10 km under the earth, according to the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency.
The intensity of the quake was felt at MMI III (Modified Mercalli Intensity) in Tehoru sub-district in the district, the district capital of Masohi, Bula sub-district in Seram Bagian Timur district, and Kairatu sub-district in Seram Bagian Barat district.
The tremors were also felt at MMI II in the provincial capital of Ambon, it said. Enditem
1.Members of search and rescue team are seen near damaged houses aftera6.1 magnitude quake hit Majang Tengah village in Malang, East Java, Indonesia, April 11, 2021. Six people were killed, another one was seriously injured, and scores of buildings were damaged aftera6.1-magnitude quake rocked Indonesia’s western province of East Java on Saturday, officials said. The earthquake struck at2p.m. Jakarta time (0700 GMT) with the epicenter 96 km south of Kepanjen town of Malang district withadepth of 80 km, Andry Sembiring, an official at the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency, said. (Photo by Putri/Xinhua)